Etu esi ewepu ihe a huru na Instagram (3 solutions) | Nzukọ Ekwentị
Maka ihe kpatara ya, n'ọtụtụ oge anyị achọghị ịhapụ "ahụrụ" na ozi ụfọdụ anabatara anyị Instagram. Na nke a, anyị ga-enyocha ụzọ dị iche iche iji mee ya. Anyị na-agwa gị otu esi ewepu ihe a huru na Instagram.
Nke mbu, ekwesiri ikwuputa ya ihe kpọmkwem bụ nke a Callignign na ihe bụ ọrụ ya. N'uzo sara mbara, enwere ike ịsị na "ahụrụ" bụ na Instagram ihe acha anụnụ anụnụ "nyocha abụọ" bụ WhatsApp. N'okwu abụọ ahụ, sistemụ nke na-enyere anyị aka ịmata ma onyonyo ma ọ bụ ozi ezitere ka onye nnata anabata ma gụọ ya. Nakwa mara ma eleghara ha anya.
Ọ bụ usoro bara uru ma bara uru, belụsọ n'oge ndị ahụ mgbe, dị ka ndị natara ozi ahụ, anyị achọghị ka ama ozi a. Nke a, ihe niile a tụlere, bụ otu ụzọ ọzọ iji kpuchido nzuzo anyị. Na WhatsApp o zuru ezu imebi nhọrọ a, mana na Instagram anyị enweghị ohere a. Ya mere, gịnị ka ị ga-eme? Etu esi ewepu ihe a huru na Instagram? Ka anyị lee nke bụ ụzọ atọ kachasị dị irè:
1 Usoro 1: Mee ka ọkwa dị na ekwentị
2 Usoro 2: Jiri "Ọnọdụ ụgbọelu"
3 Method 3: Ahụghị
Usoro 1: Mee ka ọkwa dị na ekwentị
Kwado ọkwa Instagram ka ị gụọ site na email (ma zere "a hụrụ")
Usoro a dị maka ndị gam akporo na ndị ọrụ iPhone. Mgbe ibudata Instagram na ngwaọrụ anyị, ọkwa na-arụ ọrụ na ndabara. Agbanyeghị, anyị nwere ike ijide n'aka ịlele nhazi ahụ ọzọ. Ndị a bụ usoro ịgbaso:
Tinye profaịlụ Instagram gị Na aka nri aka nri, pịa akara ngosi nwere ọnya atọ atọ iji họrọ nhọrọ n'ebe ahụ "Isetịpụ".
Wee pịa "Ificationsma Ọkwa" wee banye "Direct Ozi".
N'ebe ahụ ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na arụ ọrụ ejiri rụọ ọrụ: arịrịọ ozi, ozi na-esite na "Isi" na ndị na-esite na "General". Ọ bụrụ na ha apụta na acha anụnụ anụnụ Ọ pụtara na ndị a ificationsma Ọkwa na-arụ ọrụ. Ugbu a, ọ bụ ajụjụ ịhọrọ ndị anyị chọrọ ịga n'ihu na ndị a abụghị.
Pịgharịa gaa ruo mgbe ị ruru "Nhọrọ nhọrọ nhazi usoro ọzọ" ime nhọrọ a nke nhọrọ gị dị ka ihe ị masịrị gị.
Kedu ihe anyị ga-esi na nke a? Dị mfe: ịnwe ọkwa na-arụ ọrụ, ha ga-ebu ụzọ rute igbe mbata email gị. Site n'ebe ahụ, na-enweghị imeghe ha ma ya mere na-egosi dị ka echiche, ị nwere ike ịgụ ha, zaa ha (ọ bụrụ na ịchọrọ) na ọbụna ihichapụ ha.
Ihe dị mkpa: maka nke a iji rụọ ọrụ wee si otú a gbochie akara "ahụrụ" ka ọ pụta n'ihu onye zitere anyị ozi ahụ, ị ​​ga-emerịrị Gbaa mbọ hụ na ịnweghị nkata a na-ekwu.
Usoro 2: Jiri "Ọnọdụ ụgbọelu"
Otu ojiji ọzọ nke Ọnọdụ ụgbọelu na mkpanaka gị: zoo "ahụrụ" na ozi Instagram
Dị mfe dị ka nke ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ya, mana ọrụ a ekwentị mkpanaaka tinyegoro bara oke uru maka ebumnuche anyị. Ọ naghị aza ajụjụ banyere otu esi ewepu ihe a hụrụ na Instagram mana dozie nsogbu ahụ.
Kedu ka o si arụ ọrụ? Site n'itinye mobile na «ọnọdụ ụgbọelu " A na-egbochi njikọ Internetntanetị na ọrụ ekwentị ndị ọzọ. Mgbe ahụ, oge eruola ịbanye na ngwa ngwa Instagram ma nyochaa ozi na-enweghị "hụrụ" na-egosi na-ahapụghị akara ọ bụla.
N'ezie, echiche a dị mfe ma usoro ahụ na-arụ ọrụ, mana ọ bụghị azịza zuru oke. Ọ bụrụ na ị ga-eji nke a dị aghụghọ ịgụ ozi Instagram na-enweghị ịhapụ akaraI kwesịrị ịma na a ga-akara ha niile akara "hụrụ" oge ị megharịrị njikọ ịntanetị ahụ. Na ndị ọzọ okwu: na "ụgbọelu mode" kama izere "hụrụ" ihe anyị na-aga ime bụ igbu oge oge ọ pụtara.
Method 3: Ahụghị
Gụọ ozi Instagram gị "incognito" na-adịghị ahụ anya
-adịghị ahụ anya (nke n’asụsụ Bekee pụtara n’ụzọ nkịtị “ahụghị ya”), bụ ngwa bara uru ma na-atọ ụtọ. Ikekwe nke ga-enyere anyị aka karịa ma ọ bụrụ na ịchọta ụzọ iji wepụ "ahụrụ" na Instagram.
Enwere ike ibudata ya n'efu maka gam akporo na Google Play. Ozugbo arụnyere na ngwaọrụ anyị, nke a bụ otu anyị ga - esi jiri ya:
Mbụ ị ga-ebudata ngwa ahụ na njikọ a: -adịghị ahụ anya.
Mgbe echichi, anyị ga-ahọrọ na-elekọta mmadụ chat ngwa ọdịnala na ekwentị anyị ebe anyị chọrọ ime ka-adịghị ahụ anya ọrụ na-eje ozi. N'okwu a, ị ga-eme ya họrọ Instagram.
Ọzọ ị ga-eme nye ikike nnweta ahụghị anya na notma Ọkwa.
N'ụzọ nke a, oge ọ bụla ị natara ọkwa na mkpanaka gị na ngwa ndị edepụtara na mbụ, ha ga-ebu ụzọ gafee "nzacha" a na-adịghị ahụ anya, nke ga-ahụ maka idobe ọrụ gị nke ọma. Yabụ, ị ga-enwe ike ịgụ ozi Instagram na-enweghị akara ngosi '' hụrụ '' ka ọ pụtara, n'ụzọ zuru oke ma nwee ntụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu esi ewepu "ahuru" na Instagram
Egwuregwu ise kachasị yiri nke a